Ecodesign: yintoni na, iimpawu kunye noncedo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 28/04/2022 12:00 | Yendalo
Kwiminyaka yakutshanje, ukwanda kokuqonda kwamaziko nentlalo ngokusingqongileyo kuye kwakhokelela ekuveleni kwe ecodeign. Ukurisayikilishwa kwenkunkuma kufumene ukupapashwa ngakumbi kumajelo eendaba, umzekelo ngokukhuthaza ukuthengwa nokuthengiswa kwezinto ezisetyenzisiweyo. Nangona kunjalo, lo ngumlinganiselo ongaphezulu kakhulu ojolise ekunciphiseni izixhobo esizisebenzisayo kunye nenkunkuma esiyivelisayo. Kule nto, kuyimfuneko ukungenelela kwiinkqubo zolawulo ukwenzela ukuzisa i-ecodesign kuyo yonke indawo eyakhiweyo.
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela yonke into okufuneka uyazi malunga ne-ecodesign, iimpawu zayo kunye nokubaluleka.
1 Yintoni i-ecodesign
2 Iimpawu ze-ecodesign
3 U mzekelo
4 Imveliso ezinzileyo kunye noyilo
5 iinzuzo zokusingqongileyo
I-Ecodesign sisigaba senkqubo yophuhliso lwemveliso ejolise ekunciphiseni impembelelo yokusingqongileyo yemveliso. Kunokuthiwa oko ukufezekisa uzinzo loqoqosho ngundoqo kwinkqubo yolawulo, kuba ngokudala kunye nokuhlengahlengiswa kweemveliso ezihlonipha indalo, kunokwenzeka ukuyeka ukuthotywa kwezinto eziphilayo, ukuchithwa kwemithombo yendalo kunye nemiphumo yokubambisa echaphazela kakubi i-ecosystems kunye nempilo yabantu. Imigaqo ye-ecodesign yile:
Ubuchule bokwenziwa kwemveliso, oko kukuthi, ukusebenzisa ubuncinci bezinto kunye namandla anokwenzeka.
Yenzelwe ukuba idityaniswe, ivumela ukuphinda kusetyenziswe imveliso kwixesha elizayo, icandelo ngalinye linokuchongwa ngokulula kwaye lihlulwe ukulahlwa ngokuchanekileyo ngokwendalo kunye nokwakheka kwayo.
Ukuvelisa iimveliso usebenzisa enye okanye ngaphezulu "bio" imathiriyeli ukwenza lula inkqubo yokurisayikilisha.
Sebenzisa iimilo ezomeleleyo kunye nemathiriyeli.
Ukuguquguquka kunye nokuba nokwenzeka kokuphinda kusetyenziswe kunye nokuphinda kusetyenziswe imveliso.
Ukunciphisa ubungakanani beemveliso ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse (GHG) ngexesha lothutho. Ngenxa yoko, iimveliso ezininzi zinokuthuthwa ngohambo ngalunye, kuphuculwe indawo kunye nokusetyenziswa kwamafutha efosili.
Ukuphatha iimveliso njengeenkonzo kwaye hayi njengezinto nje, ukunciphisa ukusetyenziswa kwazo kwiimfuno kwaye hayi kwiminqweno yokuba nezinto, okwangoku kuphawula isiqhelo sentengiso.
Ukuxhasa itekhnoloji entsha ukuphucula ukusebenza kwemveliso.
Ukusasaza kwaye udibanise umyalezo wozinzo wemveliso kuyilo lwayo.
Ekugqibeleni, Injongo ye-ecodesign kukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo yeemveliso esizisebenzisayo kubo bonke ubomi babo obuluncedo kwaye iqinisekisa impilo-ntle kunye nomgangatho wobomi babasebenzisi. Ezinye zeempawu eziphambili ze-ecodesign zezi:
Ukukhuthaza ukusetyenziswa koqoqosho lwesetyhula.
Unokunciphisa iindleko zokucubungula kunye nokuthunyelwa kwemveliso.
Iphucula inkqubo yokuvelisa kwaye ngoko umgangatho wemveliso efunyenweyo.
Inegalelo kubume obutsha benkampani.
Iphakamisa amanqanaba amane avumela ukusebenza ekuphuculeni, ukuyila ngokutsha, ukudala kunye nenkcazo yeemveliso ezintsha kunye neenkqubo ezintsha zemveliso.
Kuphephe ukumosha izixhobo.
Emva kokuba ubomi obuluncedo bemveliso buphelelwe lixesha, cinga ukuba imveliso iyahlaziywa kwaye isetyenziswe kwakhona, inika ixabiso kwinkunkuma.
Kukho izicwangciso ezahlukeneyo ze-ecodesign ezinje: Ivili le-LiDS kunye neqhinga le-PILOT.
Kwimizekelo ye-ecodesign eboniswe ngezantsi, ezinye ziyinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla, ngelixa ezinye zibonisa uphuhliso olusebuntwaneni babo:
I-Ecodesign yeefriji, iifriji kunye nezinye izixhobo ezifana nezifudumezi, oomatshini bokuhlamba kunye nezixhobo zokuhlamba izitya, ezilawulwa yiKhomishini yaseYurophu (EC).
Uyilo kunye nokwakhiwa kwezakhiwo ze-ikholoji.
Oomatshini bekofu baseTaliyane kuba abasebenzisi izihluzi zephepha.
Ifenitshala yenziwe ngemathiriyeli enetywina leFSC (IBhunga lokuLawula ihlathi) kunye nemathiriyeli esetyenzisiweyo.
Ifenitshala ithengiswa ingadityaniswanga, inciphisa ubungakanani bemveliso kunye nokulungiselela ukuhanjiswa.
Ifenitshala yoyilo esuswayo efana neebhentshi zasezidolophini.
Sebenzisa inkunkuma yamalaphu, iiplastiki ukwenza iimpahla.
Imveliso ezinzileyo kunye noyilo
Kwihlabathi elisingise kubantu abazibhiliyoni ezisi-8, imodeli yakudala yoqoqosho oluhambelanayo iphelelwe lixesha kwaye isikhokelela kwikamva elingaqinisekanga. I-Ecodesign izalwe ngaphakathi kwesi sikhokelo, iimveliso ezizinzileyo zibandakanya iindlela zokusingqongileyo kuzo zonke izigaba zazo: ukuqulunqa, uphuhliso, uthutho kunye nokurisayikilisha.
Kufuneka sivelise ngcono kwaye ngokufanelekileyo, ngenxa yezizathu ezicacileyo: izinto eziluhlaza kunye nemithombo yendalo ayinasiphelo, kwaye ukuba asiyikunyamekela, inokuphelelwa. Amanye, njengamanzi, abalulekile ebomini, ngelixa amacandelo aphambili oqoqosho exhomekeke kwizimbiwa, ezifana neshishini letekhnoloji. Ukuba songeza ukukhutshwa kwe-carbon dioxide kunye nokusetyenziswa kwamandla kumaziko okuvelisa, iplanethi ayiyi kuhlawula iindleko.
Iziphumo zokuthengwa kwabathengi-ngokweGreenpeace, sisebenzisa i-50% yobutyebi bendalo ngaphezulu namhlanje kuneminyaka engama-30 eyadlulayo - ikhokele iZizwe eziManyeneyo (UN) ukufuna indlela entsha yemveliso yokwandisa izixhobo kunye namandla, ukuphuhlisa amandla ahlaziyekayo, ukugcina iziseko ezingundoqo, ukuphucula ukufikelela kwiinkonzo ezisisiseko kunye nokudala imisebenzi ye-ikholoji kunye nomgangatho.
Iinzuzo zokusingqongileyo kwimveliso ezinzileyo zikwanceda amashishini kunye nabemi. I-UN ithi inkqubo ilungile kumntu wonke kuba iphucula umgangatho wobomi bezigidi, iyanciphisa intlupheko, yandisa ukukhuphisana kunye nokunciphisa iindleko zezoqoqosho, zendalo kunye nezentlalo.
Iinzuzo ze-ecodesign ngokwemiqathango yemveliso kunye neekhonsepthi zenkonzo zininzi kwaye zinceda ukunciphisa imiba yokusingqongileyo yeemveliso zemvelinjengolawulo lwenkunkuma.
Ngelishwa, kukho nezinye izinto ezingeloncedo ezithintela le ndlela ukuba yamkelwe njengomgangatho kwisizukulwana seemveliso kunye neenkonzo, njengolwazi oluncinci umthengi analo malunga nezi mveliso, ixabiso lemveliso liphezulu kunelo lemveliso yemveli. ngamaxesha amaninzi , uphendlo lwemathiriyeli yeendlela ezizezinye zoyilo kunye nokwazisa ezi mveliso kumacandelo emarike akhuphisana kakhulu, njengezindlu zeplastiki.
Ke, njengesiphelo, sinokubona ukuba ngaphandle kweenzuzo ezinomtsalane ze-ecodesign zombini kubavelisi kunye ne abathengi, ukusilela kwayo kusaphazamisa ukuthandwa kwayo kwimarike yanamhlanje kwaye, ke ngoko, ithintela ukusetyenziswa kwayo ekuthathweni kwethu kwimikhwa yokusetyenziswa. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqhubeka nokuyibona njengenye indlela ebalulekileyo yokujongana neengxaki ezinkulu zokusingqongileyo ezisithwaxayo, ezidityaniswe namanyathelo omthetho, ukusetyenziswa okunoxanduva kunye nokwamkelwa kolwazi olupheleleyo lwendalo kuluntu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga ne-ecodesign kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ecodesign